Ukuya iresiphi lazy iklabishi imiqulu ne inyama nengulube
Kunezindlela eziningi ezahlukene ukupheka iklabishi. Mhlawumbe Classic kakhulu - lena lapho ukugxusha ilayisi zihambisana amahlamvu iklabishi. Kodwa ngale ndlela - ngokwanele isikhathi. Ngakho-ke, thina beveza recipe ukuthi usevele kwegama ngokwayo - iresiphi lazy iklabishi imiqulu ne inyama nengulube.
Yiziphi ukhululekile? Iqiniso lokuthi ukupheka iklabishi imiqulu kungaba cishe kunoma iyiphi dish: a cauldron, uyithose pan, pan pan kuhhavini. Ake sicabangele izindlela zakudala futhi Casserole.
Izithako: inyama nengulube yengulube kanye yenkomo - 0.8 kg, amahlumela amasha, iklabishi ngokucacile - 0.5 - 0.6 kg, irayisi - amabili inkomishi lwesithathu, ukhilimu - 0.5 kg, onion isanqante - eyodwa ngesikhathi, utamatisi unama - ezintathu wezipuni emnyama - 1/2 isipuni sikasawoti - ithisipuni elilodwa, isinkwa imvuthu ejwayelekile.
Manje useneminyaka engu- iresiphi lazy iklabishi imiqulu ne inyama nengulube. Engeza nengulube inyama lisikiwe onion, usawoti, pepper kanye isiyaluyalu. Three on a grater izaqathe esihle bahlanza futhi liphazamisane ukugxusha. Bilisa irayisi emanzini anosawoti. Ubuningi fake usike iklabishi uthele amanzi abilayo imizuzu emithathu. Amanzi ke wathela off futhi ungeze ukugxusha iklabishi, bawe Fig elele. Hlanganisa konke ubebushelezi, inkathi ngosawoti kanye pepper. Manje thina sculpt Burgers, paniruem nabo breadcrumbs, Fry kwabo phezu ukushisa eliphezulu endaweni Skillet. Agazingiwe eyayigcwele sandile ikhanzi ngaphambilini ezinamafutha akahle, uthele sauce (amanzi ingilazi phansi, utamatisi unama, ukhilimu kanye nengxenye isipuni sikasawoti) kuhhavini ubhake at 180 degrees imizuzu 45.
Leresiphi lazy iklabishi imiqulu ne inyama nengulube muhle ukuthi isidlo bayokujabulela ukudla, ngisho nalabo ungathandi iklabishi. Futhi Imi ezincane ke, lo tastier isidlo kuyoba.
Lazy iklabishi iresiphi kodwa indlela entsha - ngesimo casseroles
Izithako: inyama nengulube yengulube kanye yenkomo - 0.7 kg, iklabishi - 0.4 kg, 20-25% ukhilimu - 0.3 kg, irayisi - 0.15 kg, anyanisi - 2 izicucu, amanzi - nezindebe amabili nengxenye wezipuni utamatisi unama - omunye isipuni ushukela - ithisipuni elilodwa, pepper kanye nosawoti.
Manje silungiselela lazy iklabishi imiqulu. Ukuze uqale, qinisekisa sauce: mix noshukela utamatisi unama amabili iingobho zamanzi. Oqoshiwe onion exutshwe inyama nengulube, usawoti, pepper. Kuphinde futhi kube iklabishi kakhulu oqoshiwe, uma kuyintando grade ebusika - umzuzu owodwa ugcwalise ngamanzi abilayo. Thela amanzi abilayo imizuzu embalwa, nelayisi. On phansi kuhhavini ukusabalala iklabishi, uthele 1/4 sauce ungqimba elilandelayo - Fig futhi impregnate ibhandishi ke - ukugxusha, okuyinto uthele sauce ezisalayo. Ubhake kuhovini, okuyinto eliwu 200 degrees imizuzu engu-40. Khonza ukukhonza fafaza ngamakhambi.
Indlela ngenhla lazy iklabishi imiqulu ne inyama nengulube - fast kakhulu, kodwa inqubo kungenziwa washesha nakakhulu uma iklabishi anyanisi bafa futhi twist e-grinder inyama. Pig-umhlabathi yenkomo, uma uthanda, kungenziwa esikhundleni inkukhu noma nemifino ngokuvamile - kusuka amazambane, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi.
Ngo okuhlukahlukene ezihlukahlukene amazwe aseMpumalanga Yurophu babe izindlela zabo ezahlukene lazy iklabishi imiqulu. Esikhathini Carpathians, isibonelo, isebenzisa sauerkraut, futhi kuvela esihlwabusayo kakhulu!
Cafe Queen: Incazelo
Indlela ukupheka neklabishi nge isanqante ekhaya: zokupheka kanye nezincomo
Amakhekhe Homemade - iresiphi, osekuyisikhathi eside isetshenziswa
The elula isiduli esikhulu ikhekhe recipe kwasebusheni bami
Indlela apheke nutria? Ungadliwa, indlela ukupheka nutria okumnandi
Izikuta Trolo: izici kanye nezinzuzo
Tchaikovsky, umdanso we-ballet "Sleeping Beauty": isifinyezo
Imibhede zamatshe - isixazululo ezinhle ngokuba infield
Martin McDonagh - a Gogol entsha anti-Tarantino
Kuyini isiraphu glucose futhi kanjani it ekuphekeni